Dhuxulo kuleyl ah oo kuleyl ah oo dhalaalaya kuleylka kuleylka
Bogga ugu weyn / Cadaadin foosto / Birta Foornada Foornada Been Abuurkeedu Yahay
Categories: Cadaadiska Nalalka Dabaysha, Cadaadin foosto Tags: aluminium boodh kulul oo kulul, aluminium kulul foorno kulul, boodh aad u fara badan, Foornada kuleylka kuleylka ah, wargeyska kuleylka ah ee foornada kulul, baqshiifka boodboodka ah ee kulul, bakhti-galinta boodhadh kulul, abuurna kulul induction, Metals Billet Hot Mugdi, Metals Billet Foosto kulul, maadooyinka kulul ee kulul
Metals Billet Hot foollada leh dhalaalinta kuleylka kululaynta baalal / aluminium / birta birta ah ka hor inta aysan kululeyn
Kuleylka induction waxaa si wayn loogu shaqeeyaa biraha qashinka lagu iibiyo warshadaha kuleylka si ay u kululaadaan balaastigaa oo lagu qasbo kulul. Warshadaha shaqaynta birta, kuleylka kulul ee kulul waxaa lagu kululeeyaa heerkulka hareeraha 1000 oC-1250 oC sida ku cad content carbon content iyo walxaha aloeing. Hannaanka geedi socodka kulul waxay u baahan tahay kuleylka kuleylka ah ee baaldi isku mid ah labadaba dhinaca bidixda iyo dhinaca kale ee bistoolada. Guud ahaan heerkulka ugu horeeya ee betaalku waa heerkulka qolka waxaana loo baahan yahay in kuleylka la kulmo heerkulka dib-u-celinta ee habka kululaynta. Waxaa jira siyaabo kala duwan oo lagu kululeeyo biraha foornada kulul oo ay ku jiraan kuleylka induction, foornada dabka foornada, foornada dabka lagu shido, kululeeyaha kulaylaha iyo kululeeyaha caabbinta korontada. Kuleylka induction wuxuu leeyahay faa'iidooyin kala duwan oo ku saabsan hababka kale ee kuleylinta ee foornada kulul. Ugu horreyntii, nidaamka kuleylka induction wuxuu abuuraa xoogaa kuleyl aad u sarreeya si deg deg ah oo qeexan qaybta birta. Intaa waxaa dheer, nidaamyada kuleylinta kuleylaha ayaa ah nidaam degdeg ah, maxaa yeelay nidaamyadani uma baahna wakhti u qalma sida kuleylka kuleylka. Sidoo kale, wakhtiga kuleylintu waa mid aan gebi ahaanba gaabanayn hababka kale. Marka loo barbardhigo kuleylka gaaska iyo saliidda, kuleylka iyo dib u soo celinta xaalad kuleylka wakhti kala duwan ayaa si sahlan loo gaari karaa. Gaadiidka waxaa loo isticmaali karaa nidaamyada kuleylka kuleylka. Waxay u baahan doontaa booska ugu hooseeya ee dukaanka. Kuleylka induction sidoo kale waa tamar badan tamar iyo jawi bey'ad badan. Ma jiri doonto wax soo-saarku soo gaadhsiiso waxyeello u geysata bey'adda sida kuleylka gaaska iyo saliidda shidaalka. Faahfaahin dheeraad ah oo ah foornada dabka fuushay ayaa keenaysa tayada hoose ee sababa sababtoo ah miisaanka. Kuleylka induction wuxuu bixiyaa dhimis aad u weyn oo ah qaabeynta miisaanka iyo dib-u-dhiska kombiyuutarada kulul.
Qodobbada maadiga ah ee kuleylka foornada lagu dhejiyo:
Qalabka makiinada qashinka lagu kululeeyo kuleylka foornada oo dhan kuleylka ama boombada ayaa la kulaalaa. Caadi ahaan bikitaalada gaaban ama lakabyada hoomada ama baaquliga ayaa loo isticmaalaa si toos ah u soo bandhigaan baaldiyada si ay u xajiyaan silsiladaha, silsiladaha istiraatiijiga ah ee istiraatiijiga ah ama mararka qaarkood feeraha pneumatic. Biilashka ayaa markaa lagu riixaa koollada ka dambaysa midka kale ee dusha biyaha la qaboojiyey ama dhejiyeyaasha dhoobada waxaa loo isticmaalaa iyada oo loo marayo xuddunta xaglaha taasoo hoos u dhigaysa jahwareerka iyo ka hortagga xirashada. Dhererka koolladu waa hawl ka mid ah wakhtiga qoyan ee loo baahan yahay, wakhtiga wareegga ee qayb kasta iyo dhererka baaldiga. Mugga sare ee qaybta weyn ee shaqada wuxuu u shaqeynayaa ma aha wax aan caadi ahayn in 4 ama 5 ay xirxiraan taxane ah si loo siiyo 5 m (16 ft) ee isku xiran ama ka badan.